Ngokuphathelele uAdolf Loos, uMvulindlela kwi-Modernist Architecture
Umcwangcisi we-No Ornamentation (1870-1933)
U-Adolf Loos (owazalwa ngoDisemba 10, 1870) wayengumqambi owaziwayo ngokugqithiseleyo ngemibono yakhe nangemibhalo ngaphandle kwezakhiwo zakhe. Wayekholelwa ukuba isizathu sifanele sigqibe indlela esiyakha ngayo, kwaye wayechasa ukunyakaza kwe- Art Nouveau . Iingcamango zakhe malunga nokuqulunqwa kweempembelelo zangekhulu le-20 leminyaka kunye nokuhluka kwayo.
UAdolf Franz Karl VikrLoos wazalelwa eBrno (Brünn), okuyiyona iNingizimu yaseMoravian Region yintoni ngoku eyiRiphabhliki yaseCzech.
Wayeneminyaka elithoba xa uyise wafa. Nangona iLoos yenqabile ukuqhuba ishishini lentsapho, kakhulu kunxungulo lunina, wahlala ethanda ukuyila. Wayengumfundi olungileyo, kwaye kuthiwa uneminyaka engama-21 iLoos yachithwa yi-syphilis-unina wamphika ngelixesha elineminyaka engama-23.
I-Loos yaqalisa izifundo kwiRoyal kunye ne-Imperial State Technical College eRechenberg, eBohemia ize idlule iminyaka emkhosini. Waya kwiKholeji yeThekhnoloji eDresden iminyaka emithathu, emva koko waya eUnited States, apho wayesebenza njengeemason, umgca we-floor, kunye ne-dishwasher. Ngethuba e-US, wahlaziywa ngumsebenzi wezakhiwo zaseMelika, kwaye wayemthanda umsebenzi kaLouis Sullivan.
Ngowe-1896, uLoos wabuyela eVienna waza wenza umsebenzi wezakhiwo uCarl Mayreder, Ngo-1898, uLoos wavula indlela yakhe eVienna waza waba ngabahlobo-bulumko be-free-philosophy uLudwig Wittgenstein, umqambi wezobugcisa uAnold Schönberg kunye no-Karati Kraus.
U-Adolf Loos uyaziwa ngokuba ngumlomo wakhe we-1908 kunye ne-Verbrechen, eguqulelwe njengeNgcaciso kunye noLwaphulo-mthetho . Oku kunye nezinye iincwadana zeLoos zichaza ukunciphisa umhlobiso njengoko kuyimfuneko kwiinkcubeko zanamuhla ukuba zikho kwaye ziguquke ngaphaya kweenkcubeko ezidlulileyo. Isikhumbuzo, nangona "ubugcisa bomzimba" njengama tattoos, kulungele ukushiya abantu bokuqala, njengabantu basePapua.
"Umntu wanamhlanje onobumba bakhe ulwaphulo-mthetho okanye unobungozi," u-Loos ubhala. "Kukho iintolongo apho iibhozo ezingamashumi asibhozo kweebanjwa zibonisa iittoti. Abathandwayo abangekho entolongweni abaphuli-mthetho abasecaleni okanye abahloniphekileyo."
Izinkolelo zeLoos ziye zafikelela kuzo zonke iinkalo zobomi, kubandakanywa nezakhiwo. Wayexela ukuba izakhiwo esiziyiyo zibonisa ukuziphatha kwethu njengentlalo. Ubungqina obutsha bobuncwane beChicago School befuna i-aesthetic entsha- yenziwe yintsimbi yeentsimbi ezinokulinganisa izinto ezidlulileyo zezinto zokwakha izakhiwo? I-Loos yayikholelwa ukuba izinto ezixhomekeke kwisikhokelo kufuneka zibe njengamanje njengesikhokelo ngokwaso.
ULoos waqalisa isikolo sakhe sokwakha. Abafundi bakhe babandakanya uRichard Neutra kunye no- RM Schindler, bobabini baba udumo eMelika emva kokufudukela kwi-West Coast. UAdolf Loos wasweleka eKalksburg kufuphi naseVienna, eAustria ngo-Agasti 23, 1933. I-gravestone yakhe eyenziwe yiCentral Cemetery (i-Zentralfriedhof) eVienna yinto elula yelitye egama lakhe kuphela.
Imizi eyenzelwe iLoos ebonisa imigca echanekileyo, izindonga ezicacileyo kunye neefestile, kunye neengcingo ezicocekileyo. Ukwakhiwa kwakhe kwakha ukubonakaliswa ngokomzimba kweengcamango zakhe, ngokukodwa i- raumplan ("isicwangciso semiqulu "), inkqubo yokudibanisa, ukudibanisa izikhala.
Iimveliso ezifanelekileyo zimele zingabikho ngaphandle kwempahla, kodwa i-interiors kufuneka ibe nesityebi ekusebenzeni nasekuqhubeni. Ikamelo ngalinye lingase libe kwindawo ehlukeneyo, ngeepansi kunye neelilings ezibekwe kwiindawo eziphakamileyo.
Izakhiwo ezimelelelwe yiLoos ziquka izindlu ezininzi eVienna, e-Austria-ngokukodwa i-Steiner House, (1910), iHaus Strasser (1918), i-Horner House (1921), i-Rufer House (1922) kunye ne-Moller House (1928). Nangona kunjalo, i-Villa Müller (ngo-1930) ePrague, eCzechoslovakia yenye yezinto eziye zafundwa kakhulu, ngenxa yendawo yangaphandle ebonakala ngathi yilula. Ezinye izinto eziphambili ngaphandle kweVienna ziquka indlu eParis, eFransi ngenxa yomculi weDada uTristan Tzara (1926) kunye neKhuner Villa (1929) eKreuzberg, e-Austria.
Isakhiwo se- 1910 seGoldman & Salatsch, esibizwa ngokuthiwa yiLooshaus, senze ihlazo ngokunyanzela iVienna kwixesha lanamhlanje.
Iimpawu ezikhethiweyo kwiNgcaciso noLwaphulo-mthetho :
" Ukuzivelela kwenkcubeko kufana nokutshatyalaliswa kwempahla evela kwizinto ezisetyenziswayo. "
Ubuncwane bomntu ubuso kunye nayo yonke into efikelele kuyo kukuqala kobugcisa beplastiki. "
" Umhlobiso awuyikuphakamisa uvuyo lwam ebomini okanye uvuyo ebomini nawuphi na umntu ohlalisiweyo. Ukuba ndifuna ukutya isiqwenga se-gingerbread Ndikhetha enye ehamba kakuhle kwaye ayikho into emele intliziyo okanye umntwana okanye umgibeli, ihlanganiswe yonke imihlobiso. Indoda yecala leshumi elinesihlanu ayayi kundiqonda.
" Inkululeko evela kumhlobiso ngumqondiso wokomelela ngokomoya. "
Le ngcamango-ukuba nayiphi into engaphaya kwayo isebenze-yayingumbono wanamhlanje kwihlabathi jikelele. Ngaloo nyaka unyaka wokuqala uLoos washicilela isicatshulwa sakhe, umculi waseFransi uHenri Matisse (1869-1954) wakhupha isimemezelo esifanayo malunga nokwakhiwa komzobo. Kwimfutshane ye-1908 Iimpawu zoMdwebi , uMatisse wabhala ukuba into engayisebenzisiyo kwipayili inobungozi.
Nangona iLoos sele ifile iminyaka emininzi, iingcamango zakhe malunga nokuqulunqwa kwezakhiwo zisoloko zifundiswa namhlanje, ngakumbi ukuqala ingxoxo malunga nokuhlobisa. Kwiziko eliphezulu, ikhompyutha apho kukho into enokwenzeka, umfundi wezakhiwo zanamhlanje kufuneka akhunjuzwe ukuba ngenxa yokuba unako ukwenza into, ngaba wena?
Umlomo kunye noLwaphulo-mthetho: Iimvavanyo ezikhethwe ngu-Adolf Loos
UOtto Wagner, u-Adolf Loos, kunye neNdlela eya kwi-Modern Architecture nguWerner Oechslin, i-Cambridge University Press, ngo-2002
Ukudala Ikhaya Lakho Ngomdlalo ngu-Adolf Loos
Imithombo: U- Adolf Ulahlekelwe nguPanayotis Tournikiotis, iPrinceton Architectural Press, 2002; Iingcaphuno ezikhethiweyo zivela "ngo-1908 u-Adolf Loos: Iingubo kunye noLwaphulo-mthetho" kwi-www2.gwu.edu/~art/Temporary_SL/177/pdfs/Loos.pdf, ukufundwa ngokufanelekileyo kwiwebhusayithi yeYunivesithi yaseGeorge Washington [kufumaneka ngoJulayi 28, 2015]
I-Biografier yaseNtaliyane isakhiwo seRenzo Piano
Mayelana no-Abraham ekhaya likaLincoln e-Springfield, e-Illinois
UJulia Morgan, Owesifazane owakha i-Hearst Castle
Ngaba Uya kuphumelela kwiPenny Fool uvavanyo lweBreathalyzer?
I-Faulkner University Admissions
Ngowe-1936 Iintlanganiso zee-Olympic Track and Field Field
Igalari yeMfihlakalo yeMfihlelo kunye neMimangaliso
Iimpapasho ezi-10 eziphezulu zeMfazwe ezisetyenziselwa njengePropaganda yezobupolitika
Umthetho kaBoyle kunye neScuba Diving
Iipropati zoMoya kunye neMpilo yokuPhilisa
I-Biography kunye neProfayili kaTito Ortiz